M.Camaleeti: 95% degmooyinka Norway wax qorshe ah ugama tagsana cunsuriyada sii kordheysa. - NorSom News
Mohamed Camaleti Cabdi oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah kana mid ahaa
aas aasayaashii dalad dhalinyaro oo looga soo horjeedo cunsuriyada iyo hadalada nacaybka ayaa sheegay in boqolkiiba shan (5%) kaliya degmooyinka Norway ay leeyahiin qorshe waxqabad oo looga soo horjeedo cunsuriyada.
Maalmahii u danbeeyay ayaa hay ‘ada Norske folkehjelp oo kaashanaysa dhalinyarteeda ayaa bilaabay olalle qaran oo loogu magac daray ka hortaga cusuriyada. Sababta kaliftay ayay sheegeen inay tahay in aad ay usoo badanayso cunsuriyada, hadana boqolkiiba shan kaliya ay degmooyinka wadanka leeyahiin qorshe looga soo horjeedo cunsuriyada. Sidaa dardeedna ay u bilaabeen howsha si olalahaan loo gaarsiino dhamaan degmooyinka wadanka.
Sidoo kale waxay sheegeen in cunsuriyada iyo nacaybku uu ku sii badanaayo bulshada dhexdeeda , sidaa dardeedna loo baahan yahay inay degmo kasta ay samayso qorshe looga soo horjeedo.
Run ahaantii degmooyin badan ayaa aaminsan inaysan degmadoodaka jirin wax cunsuriyad ah, laakinse dhab ahaantii markaad fiiriso wargaysyada maxaliga ah ee dagmooyinkaas ka soo baxo iyo sida ay dadka degaanku uga dhiibanayaa fikiradahooda qaybta kommentarka, waxaad halkaas ka dheehan kartaa inay jirto cunsurad badan . Da’yartuna ay yahiin kuwa ugu badan ee dareemo falalka cunsuriyada.
Lakiin anaga ka urur ahaan waxaan amin sanahay in degmooyinka Norway ay meel adag ka istaagi kara cunsuriyada, qorshe fiican oo lataaban karana ay ka samaynkaraan. Sida muuqada dad badan oo degaanka ka mid ah ma garan karaan waxa ay xaqiidii cunsuriyadu tahay ilaa uu iyagu la kulmaan.
waxan mar dhaweyd ka qabgalay kulan oo ay soo qabanqaabisey wasaarada dhalaanka iyo sinaanta dowlada Norwey, waxaana kulankaas ka qeybgaley reysulwaarada wadankan Arne solberg , wasiirada dhalaanka iyo sinaanta Solveig Horne iyo waliba dad aad u faro badan. Waxan looga dooday sidii loola dagaali lahaa hadalada nacaybka iyo cunsuriyada. Lakin ma anaan garan sababta uu ugu soo qaybgali waayay kulankan muhiimka ah wasiirka arimaha degmooyinka.
Waxaan rabnaaa inaAn ku sii noolaano Norway, nolal fican oo aan cunsuriyad iyo nacayb lahayn. dadkuna ay u siman yahay xaquuqda ay leeyahiin, iyadoo aan loo fiirinayn midabkiisa, diintiisa iyo jinsiyadiisa.
Previous articleAniga iyo gabadheyda yar ee labada sano jirtaba, waxey leeyihiin magangalyo uma baahnideen
Next article(Saadaal): Mustaqbalka soomaalida Norwey waa: Gabdhaha, Hablaha iyo Haweenka.